Umsebenzi oPhezulu weProfayili yeGlasi / Inkqubo yeGlasi ye-U
Iphrofayili ye-Iron U ephantsi yeGlasi / i-U ye-Glass ye-Power Glass ye-U ...
Ukhuseleko lweeGlasi zoKhuseleko / iiclass Pool Pools
Ulwazi olusisiseko Gcina ukujonga okuvela edesikeni yakho nakwichibi licacile kwaye kungaphazanyiswa ngenkqubo yokuhamba kweGlasi. Uloliwe ogcweleyo wepaneli yeglasi / uthango lweephuli zeebhaliferi zeglasi ezivaliweyo, ngaphakathi okanye ngaphandle, ukufakela inkqubo yokutshiza ngeglasi yeyona ndlela qinisekileyo yokufumana ingqwalaselo kunye nokuzisa iingcingo zokubeka emgangathweni / ukubiyela echibini ebomini. Iimpawu 1) Uloliwe oMkhulu weGlasi yeZinto eziBonakalayo zibonelela ngenkangeleko yelixesha kunye nexilongo nayiphi na enye inkqubo yendlela yokuhombisa esetyenzisiweyo namhlanje. Kubantu abaninzi, iigrasi zasesandleni seglasi zizi ...
I-Ceramic Frit kunye ne-Frosted-Low-E U-Glass yeGlasi / I-Glass ye-U
Ulwazi oluSisiseko lweTayile yeProfayile yeT U yiglasi enemibala enciphisa kokubini ukuhanjiswa okubonakalayo kunye nokukhanya. Iglasi enetayile phantse ihlala ifuna unyango lobushushu ukunciphisa uxinzelelo lobushushu kunye nokuqhekeka kwaye ithambekele ekubuyiseni kwakhona ubushushu. Iimveliso zethu zeglasi ye-U tified yeglasi ziza zinemibala eyahlukeneyo kwaye zihlelwa ngokuhambisa ukukhanya. Kucetyiswa ukuba u-odole iisampulu zeglasi yokoqobo okumelwe imibala. Imibala ye-ceramic etyheliweyo idutyulwe kwii-650 degrees celsius kwi-b ...
Ulwazi oluSisiseko Iglasi enelitha yenziwe njenge sandwich yee-2 sheets okanye iglasi edada ngaphezulu, phakathi kwayo edityaniswe kunye nestrawoplastic polyvinyl butyral (PVB) ephantsi kobushushu kunye noxinzelelo kwaye ikhupha umoya, emva koko uyifake kwindawo ephezulu -pressure kettle efumileyo isebenzisa ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lokunyibilikisa isixa esincinci somoya kwi-coating Ukucaciswa I-Flat lamised glass. ubungakanani: 3000mm × 1300mm iglasi egobileyo ebunjiweyo egobileyo;
Ulwazi oluSisiseko Iglasi yokuhlamba ye-Smart: Ukulawula ubumfihlo bakho ngokulula Ukusukela ngoku, yonke into eyimfuneko kukutshintsha kwesitshixo ukwenza iingcango zeeshawa ezibonakalayo. Itekhnoloji yeglasi enobuchule ifakiwe kwiimveliso zethu ukukunceda ukuba utshintshe imbonakalo yabo kwimfuno. Nokuba ufuna ukuzifihla kwibala loku prying okanye wenze ukukhanya okungakumbi ungene, kuya kufuneka ucofe iqhosha. Ngeglasi yethu evuthayo yeendonga zokuhlamba kunye neminyango, imfihlo yakho ihlala ikhuselekile! Ngaba ujonga iglasi ukuze udibanise ...
Ukucoca / iglasi ye-Iron enomsindo weGumbi lokuGcina
Ulwazi olusisiseko Masijongane nalo, ucango lokuhlamba asiyomnyango nje wokuhlamba, lukhetho olunesitayile esimisela ithoni yokujonga kunye nokuziva kwigumbi lokuhlambela lakho lonke. Yeyona nto inkulu kakhulu kwigumbi lakho lokuhlambela kunye nento etsala umdla kakhulu. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa kufuneka isebenze kakuhle. (Siza kuthetha malunga nomzuzu.) Apha kwiYongyu Glass, siyalwazi uhlobo olunempembelelo olunokuthi lufakwe ngumnyango weshawari okanye isisele sedubhu. Siyazi nokuba ukukhetha isitayile esifanelekileyo, ukuthungwa, kunye ...
Iglasi ye-Smart (Iglasi yokulawula ukukhanya)
Iglasi ye-Smart, ekwabizwa ngokuba yiglasi yokulawula ukukhanya, iglasi eguqukayo okanye iglasi yabucala, inceda ekucaciseni uyilo, eyimoto, eyangaphakathi kunye nemveliso yoyilo.
Amacandelo aqhelekileyo: Ngecala elinye
Amagama aphambili: ngokulandelelana
Isicelo: Ulwahlulo, igumbi lokuhlambela, iibhalkhoni, iifestile njl
Ixesha lokuhambisa: iiveki ezimbini
Iglasi ye-Smart, ekwabizwa ngokuba yiGlasi yeNgasese eguqukayo, sisisombululo esininzi. Zimbini iintlobo zeglasi ebukhali, enye ilawulwa ngombane, enye ilawulwa sisola.
Iglasi yeenkcukacha ezisisiseko ze-U okanye iglasi ebizwa ngokuba yi-U yeglasi isuka e-Austria. Ikwaveliswa ngaphezulu kweminyaka engama-35 eJamani. Njengenye yezinto eziqhelekileyo ezisetyenziswa kwiiprojekthi zokwakha ezinkulu, iglasi yeprofayile yeU isetyenziswa kakhulu eYurophu naseMelika. Isicelo seglasi yeprofayile ye-U e-China sibhalwe ngo-1990s. Kwaye ngoku iindawo ezininzi e-China ziyisebenzisela indlela yazo esekwe kumazwe angaphandle. Iglasi yeprofayile ye U yenye yeendlela zokuphonsa iiglasi. Yinkqubela phambili yokwenza i ...
Inkqubo yeGlasi ye-Iron U ephantsi / Inkqubo yeGlasi ye-Glass yamandla eNzala
Ulwazi olusisiseko I-iron encinci ye-UI yeglasi yokuveliswa kweglasi yokuvelisa izixhobo yeglasi (i-UBIPV) idibanisa izibonelelo zeglasi yokwakhiwa kweprofayili ye-U kunye nenkqubo yokuvelisa amandla elanga ukukhuthaza ukukhuselwa okuluhlaza kokusingqongileyo kunye nokonga amandla kunye nokucutha ukuphuma. I-UBIPV kunye nesixeko zinokudityaniswa ngokuvisisanayo ukwenza i-Photovoltaic ibe yinxalenye yobomi babantu. Ayisiyonto yokwakha nje kuphela, kodwa ingafezekisa ukonga amandla kunye neenjongo zokuvelisa amandla, kwaye nayo ingadityaniswa ...
Ulwazi olusisiseko I-Yongyu Glass, ilungu lomthengisi we-Ice Rink Association, ithumele i-SGCC yamkela 1/2 kunye ne-5/8 yeemveliso zeglasi kumzi mveliso weqhwa e-USA ukusukela ngo-2009. iimveliso zeglasi ezinempembelelo kubathengi bethu kwaye sabelane ngenzuzo kurhwebo. Ezinye izibonelelo Inkqubo eflathiweyo ye-ice rink yeglasi isetyenziselwa ukukhusela abaphulisi emva kwayo. Iinkqubo zeglasi zokutshintsha i-ice rink zisebenza ngeenjongo ezahlukeneyo, kubandakanya: 1) Ukukhusela ...
Izahlulo zeGlasi yoKhuseleko
Ulwazi olusisiseko Ukhuseleko lokwahlula iglasi lwenziwe ngeglasi enomgangatho / iglasi eyamisiweyo / ipaneli ye-IGU, ngokufuthi ubukhulu beglasi bunokuba yi-8mm, 10mm, 12mm, 15mm. Zininzi ezinye iintlobo zeglasi ezidla ngokusetyenziswa njengahlulelo lwesahluko seglasi, isilika yokuprinta iglasi yesahlulelo seglasi, isahlulelo seglasi, ulwahlulelo seglasi, olwahlulelweyo seglasi. Ukwahlula iglasi kusetyenziswa kakhulu eofisini, ekhaya nasekwenzeni urhwebo.
Ulwazi olusisiseko I-Yongyu Glass iphendula imiceli mngeni yezakhiwo zanamhlanje ezibonelela ngo-JUMBO / OVER-SIZED monolithic tempered, lamised, insured glass (dual & triple glazed) kunye ne-low-e camera eglasiweyo ukuya kuthi ga kwiimitha ezili-15 (kuxhomekeke ekwakhiweni kweglasi). Nokuba ngaba iimfuno zakho zeeprojekthi ezithile, iglasi eyongeziweyo okanye iglasi yokudada eninzi, sinikezela ngokuhanjiswa kwehlabathi lonke ngamaxabiso akhuphisanayo. Jumbo / Amagqabantshintshi eglasi okhuselo oluchaziweyo 1) Iglasi eneflatri ekhawulezileyo yeflat kunye / Iflethi efudumezweyo efakwa ...